Jiri ohere onyinye ekeresimesi ohuru nke Lightinthebox tupu ha agabiga | Akụkọ akụrụngwa
Jiri ohere azụmaahịa ekeresimesi Lightinthebox kachasị ọhụrụ tupu ọ gwụ
Bọchị ole na ole fọdụrụ iji mee ememme mbata nke ndị eze atọ ahụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime anyị nwere ike ịbịa nleta ha n'afọ niile, yabụ na ụbọchị ole na ole, anyị ga-ebili imeghe sọks, otu eriri na n'ezie, ụfọdụ cologne.
Guysmụ okorobịa ahụ sitere na Lightinthebox tinyere ngwaahịa dị iche iche dịka smartphones, ese foto, ndị na-ehicha agụụ ... n'etiti ngwaahịa ndị ọzọ maka naanị awa ole na ole, ka anyị wee nwee ike iji ha mee ihe tupu Christmas agbaala na kaadị akwụmụgwọ anyị wee bụrụ akụ dị oke ọnụ nke ga-esi ike nnweta.
1 Xiaomi robot ihe nhicha nhicha
2 Igwefoto Xiaomi Yi Action
3 Xiaomi ìhè njikwa
Xiaomi robot ihe nhicha nhicha
Igwe ihe mkpofu robot Xiaomi abụrụla otu n'ime ngwa ahịa kacha ere n'oge ekeresimesi a, n'ihi atụmatụ ya dị ịtụnanya yana ọnụ ala dị ala. Ihe nlere a abughi nani nchikota ichikota unyi nile di n’elu ala, ma o nwekwara ike icho ya mgbe ha na eme ya, ka ulo anyi wee na eweputa onodu ojoo. Ọnụahịa nke ọgbọ nke abụọ Xiaomi Robot Vacuum Cleaner bụ euro 629, mana obere oge anyị nwere ike chọta ya na Lightinthebox maka naanị 369,61 euro.
Zụrụ Xiaomi Robot Vacuum Cleaner
Igwefoto Xiaomi Yi Action
Igwefoto ihe eji eme ihe aghọwo otu n'ime ngwaọrụ ndị ama ama n'afọ gara aga, n'ihi akụkụ nke mma ọ na-enye anyị yana ntụgharị ya. Xdị Xiaomi Yi na-enye anyị ihuenyo nke 2,7 nke anụ ọhịa iji hụ ọdịnaya niile anyị na-edekọ na ya maka oke obosara ya nke na-enye anyị ohere ijide ihe ahụ na ogo 165. Ọnụahịa nke Igwefoto ihe omume Xiaomi bụ 34,45 euro.
Zụrụ Xiaomi Yi Action Igwefoto
Xiaomi ìhè njikwa
N'ihe banyere inye ikuku n'ime ụlọ, n'ahịa anyị nwere ụzọ ọzọ dị iche iche dịka ọkụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ oyi. Mana mgbe anyị chọrọ itinye mmetụ nke agba, nhọrọ kachasị mma bụ ịzụta ngwaọrụ dịka nke Xiaomi na-enye anyị, ngwaọrụ nke na-enye anyị ihe ruru nde 16 na nke anyị nwere ike ijikwa site na ama anyị. Ọnụahịa nke Xiaomi ìhè akara ntanetị bụ euro 20,55.
Zụrụ ọkụ ọkụ ọkụ Xiaomi
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Xiaomi, anyị enweghị ike ịhapụ ọdụ ya. Themụ okorobịa ahụ sitere na Lightinthebox tinyere Redmi 4x, ihe njedebe ya na ihuenyo 5-inch, nwere 3 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa dị n'ime anyị. Xiaomi dabere na Qualcomm's Snapdragon 435 iji bugharịa ngwaọrụ niile, ngwaọrụ nke na-enye anyị batrị 4.100 mAh. Ọnụ nke Xiaomi Redmi 4x bụ euro 99,03.
Zụta Xiaomi Redmi 4x
Nke nta nke nta, ụlọ ọrụ LeTV na-enweta niche na ahịa ahụ n'ihi oke ọnụahịa ọ na-enye nke njedebe ya. Na Lightinthebox anyị nwere ike ịchọta Le Max 2 maka naanị 125,90 euro, ọnụ ọnụ nke Qualcomm na-achịkwa Snapdragon 820, tinyere 4 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa dị n'ime. Ihuenyo 5,7-anụ ọhịa na-enye anyị mkpebi HD zuru oke. Igwefoto azụ ruru 21 mpx mgbe nke ihu dị 8 mpx. Batrị nke ọdụ a na-enye anyị ikike nke 3.100 mAh, karịa ihe ga-ezu iji kwụsị ụbọchị niile.
Zụta LeTV LeEco Le Max2
Mana ọ bụrụ na anyị achọghị imefu nnukwu ego, DOOGEE na-enye anyị Mix Lite, ọnụ na-enye anyị ihuenyo IPS 5,2-inch nke nwere HD mkpebi. N'ime anyị na-ahụ quad-core Mediatek processor esonyere 2 GB nke RAM na 16 GB nke nchekwa dị n'ime. Igwefoto azụ ruru 13 mpx ka nke ihu dị 8 mpx. Ọnụahịa nke DOOGEE Mix Lite bụ euro 75,53
Zụta DOOGEE Mix Lite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Jiri ohere azụmaahịa ekeresimesi Lightinthebox kachasị ọhụrụ tupu ọ gwụ
The "Ìhè na ime akara" nke ị na-egosi site na Xiaomi bụ ọnụ ụzọ ámá, nke ọrụ ọkụ bụ kpọmkwem nke abụọ. Ọ kachasị na-ejikwa ịchịkwa ngwaọrụ Xiaomi ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụlọ, ka ha bụrụ plọg, sensọ, bulbs smart, wdg. Echere m na ọ ga-abụ ihe bara uru banyere ya, ebe ọ bụ na ndị karịrị nnọọ € 20 na-enye ọtụtụ ihe nke onwe ha karịa nanị inye ìhè. Daalụ.
LG Q6 Alfa na LG Q6 Plus, ndị ọhụrụ so n’ezinaụlọ ahụ ugbua na Spain
Samsung gosipụtara nyocha mbụ na teknụzụ QLED, curved na Thunderbolt 3